Mmetụta Tyndall: gịnị bụ ya na ngwa ole ọ nwere na physics na kemistri | Network Meteorology
Na physics na kemistri, a na-amụ ihe ịtụnanya nke na-enyere aka ịkọwa ihe kpatara ụfọdụ ahụrụ n'oge ụfọdụ. Ihe omuma a mara dika Tyndall mmetụta. Ọ bụ ihe anụ ahụ nke onye sayensị Irish bụ John Tyndall mụrụ na 1869. Kemgbe ahụ, ọmụmụ ndị a enweela ọtụtụ ngwa na ngalaba physics na kemistri. Ọ bụkwa na ọ na-amụ irighiri ihe ndị anya na-adịghị ahụ. Otú ọ dị, n'ihi na ha nwere ike igosipụta ma ọ bụ megharịa ọkụ, ha ga-abụ ndị anaghị ahụ anya n'ọnọdụ ụfọdụ.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmetụta Tyndall na mkpa ọ nwere maka physics na onwu.
1 Kedu ihe bụ Tyndall mmetụta
2 Mkpa na onyinye
3 Agbanwe na-emetụta mmetụta Tyndall
Kedu ihe bụ Tyndall mmetụta
Ọ bụ ụdị ọdịdị anụ ahụ nke na-akọwa etu ụfọdụ irighiri mmiri ma ọ bụ n'ime gas nwere ike ịpụta n'ihi eziokwu na ha nwere ike igosipụta ma ọ bụ na-enwu ọkụ. Ọ bụrụ na anyị lere ya anya na mbụ, anyị nwere ike ịhụ na ahụghị ahụ ndị a. Otú ọ dị, eziokwu ahụ bụ nwere ike gbasasịa ma ọ bụ banye n ’ọkụ dị iche iche dabere na gburugburu ebe obibi ya, ọ na-enye ohere ịmata ọdịiche dị na ha. Enwere ike ịhụ ha ma ọ bụrụ na ha kwụsịtụrụ na azịza mgbe ha na-agagharị na-agagharị na mbara ụgbọelu nke onye na-ahụ ihe site na ọkụ siri ike.
Ọ bụrụ na ọkụ anaghị agafe n'okirikiri a enweghị ike ịhụ ya. Dịka ọmụmaatụ, iji ghọta ya n'ụzọ dị mfe karị anyị na-ekwu maka ahụ dị ka oke ntụ. Mgbe anyanwụ na-abanye na windo na-achọ ihe ọ bụla, anyị nwere ike ịhụ ntụ uzuzu na-ese n'elu ikuku. A naghị ahụ ihe ndị a anya. Enwere ike ịhụ ha naanị mgbe ìhè anyanwụ batara n'ime ime ụlọ site n'ọchịchọ ụfọdụ na ike ya.
Nke a bụ ihe a maara dị ka mmetụta Tyndall. Dabere n’otú onye na-ekiri ya si ele ya anya, ị pụrụ ịhụ irighiri ihe ndị na-agaghị enwe ike ime. Ihe atụ ọzọ nke gosipụtara Tyndall mmetụta bụ mgbe anyị na-eji nnukwu ọkụ ihu igwe na ihu igwe adịghị. Ọkụ nke mmadụ ole na ole na-arụ na iru mmiri na-enye ohere iji hụ mmiri mmiri na nkwusioru. Ma ọ bụghị ya, anyị ga-ahụ naanị ihe ikuku ahụ n'onwe ya bụ.
Mkpa na onyinye
Na physics na kemistri, mmetụta Tyndall nwere ọtụtụ onyinye na ụfọdụ ọmụmụ na nnukwu mkpa. Ma ọ bụ na ekele maka mmetụta a, anyị nwere ike ịkọwa ihe kpatara igwe ji acha anụnụ anụnụ. Anyị maara na ìhè nke sitere n ’anyanwụ na-acha ọcha. Agbanyeghị, mgbe ikuku ụwa na-abanye, ya na ụmụ irighiri gas dị iche iche mejupụtara ya. Anyi na-echeta na ikuku nke ụwa nwerekarị nitrogen, oxygen na argon molecules ruo obere. N'ihe dị ala karị bụ griin haus nke anyị nwere carbon dioxide, methane na alụlụ mmiri, tinyere ndị ọzọ.
Mgbe ọkụ na-acha ọcha site na anyanwụ rutere n'akụkụ niile nke a kwụsịtụrụ, ọ na-enweta ntụgharị dị iche iche. Nduhie nke ìhè anyanwụ na-ata site na mkpụrụ ndụ oxygen na nitrogen na-eme ka ọ nwee agba dị iche iche. Agba ndị a dabere na ogologo nrịgo na ogo nke oke. Agba ndị kacha agbagọ bụ violet na-acha anụnụ anụnụ ebe ọ bụ na ha nwere obere mkpụmkpụ. Nke a na-eme elu igwe agba a.
John Tyndall bụkwa onye chọpụtara mmetụta griin haus ekele maka nkwekọ nke ikuku ụwa n'ime ụlọ nyocha. Ebumnuche mbụ nke nnwale a bụ gbakọọ kpọmkwem ole ike anyanwụ sitere na Earthwa na ole ọ na-enughachi site na ụwa ruo na mbara igwe. Dị ka anyị si mara, ọ bụghị anyanwụ radieshon niile dara na mbara ụwa anyị na-adịgide. Igwe ojii na-eduhie akụkụ ya tupu ya eruo elu ụwa. Akụkụ ọzọ na-etinyekwa ikuku gas. N'ikpeazụ, elu ala na-eme ka akụkụ nke anyanwụ radieshon ahụ dabere na albedo nke ụdị ala ọ bụla. Mgbe nnwale nke Tyndall mepụtara na 1859, ọ nwere ike ịchọpụta mmetụta griin haus.
Agbanwe na-emetụta mmetụta Tyndall
Dịka anyị kwuburu na mbụ, mmetụta Tyndall ọ bụ ihe ọ bụla karịa mgbasa nke ọkụ na-eme mgbe otu ọkụ na-agafe site na colloid. Nke a colloid bụ onye kwụsịtụrụ ahụ na-ahụ maka na-achụsasị na-atụgharị uche ogologo, na-eme ka ha anya. Ihe mgbanwe ndị na-emetụta nsonaazụ Tyndall bụ ọnụọgụ nke ọkụ na njupụta nke ahụ. Ọnụ ọgụgụ nke ikposa mmiri nke a pụrụ ịhụ na ụdị mmetụta a na-adabere kpam kpam na ụkpụrụ nke ugboro ole nke ọkụ na njupụta nke ahụ.
Dị ka Rayleigh na-agbasasị, ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-agbasasị ike karịa ọkụ uhie n'ihi na ha nwere obere mkpirisi. Zọ ọzọ ị na-esi ele ya anya bụ na enwere ogologo ogologo ogologo nke a na-ebute site na ya, ebe a na-egosiputa obere mkpirisi ogologo site na mgbasa ahụ. Ihe ọzọ na-agbanwe ya bụ nha ahụ. Nke a bụ ihe dị iche na colloid na ezi ngwọta. Maka ngwakọta ka ọ bụrụ nke ụdị colloid ahụ, ihe ndị ahụ dị na nkwusioru ga-enwerịrị oke nha n'etiti oke dị n'etiti 1-1000 nanometers in dayameta.
Ka anyị hụ ụfọdụ n'ime ihe atụ ndị bụ isi ebe anyị nwere ike iji mmetụta Tyndall mee ihe:
Mgbe Anyị na-agbanye oriọna oriọna na iko mmiri ara ehi anyị nwere ike ịhụ mmetụta Tyndall. Ọ kachasị mma iji mmiri ara ehi ewepụrụ ma ọ bụ jiri obere mmiri tụgharịa mmiri ara ehi ahụ ka e wee nwee ike ịhụ mmetụta nke ngwakọta colloidal na ọkụ ọkụ.
Ihe atụ ọzọ bụ nke ịgbasa ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, a na-ahụkwa ya na-acha anụnụ anụnụ anwụrụ ọkụ sitere na ọgba tum tum ma ọ bụ injin ọkụ abụọ.
Igwe ọkụ a na-ahụ anya nke nnukwu ọkụ ọkụ na alụlụụ nwere ike ime ka mmiri mmiri na-ese n'elu mmiri pụta.
A na-eji mmetụta a eme ihe maka azụmahịa na ntọala ụlọ nyocha inwe ike ịchọpụta etu ụmụ irighiri akwara.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmetụta Tyndall.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Tyndall mmetụta